Mampitombo ny fifamoivoizana ny endrika 25%
Alakamisy Febroary 10, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Mbola tsy manana isika Martech Zone tena ny fomba itiavantsika azy, fa ny endrika vaovao dia fahombiazana lehibe. Ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranokala dia manana nitombo mihoatra ny 25% amin'ny pageviews mihoatra ny 30%. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fivezivezena fanampiny izay iainantsika amin'ny newsletter vaovao isan-kerinandro (misoratra anarana etsy ambony).
Ny endrika dia ambanin-javatra foana ho fitaovana mampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Ny olona izay tsy handany vola amin'ny famolavolana tsara dia matetika miady hevitra amiko momba ny fampiasam-bola amin'ny endrika matihanina. Tsy izany no izy.
Ny endrika tsara dia fampiasam-bola lehibe amin'ny orinasanao. Namantsika iray, Carla Dawson (Famolavolana alika 4), namolavola ity famerenana bilaogy ity. Nangataka zavatra madio tanteraka aho izay nahitana sary famantarana. Nanao fanitsiana roa izahay hatramin'ny nanombohana, fa ny fisio madio sy mazava kosa no tena izy taorian'izay.
Nampiditra koa izahay Thumbnail an'i Post WordPress ao amin'ny môdely fanaovana bilaogy anay ary nanampy a plugin hamoahana ho azy ny zoro thumbnail avy amin'ny sary voalohany ao amin'ny bilaogy. Tamin'ity fomba ity dia tsy nila nampiofaniko ny bilaogera rehetra momba ny fampiasana ilay endrika.
Ary koa, ny lohahevitra dia misy dokam-barotra mavitrika mifototra amin'ny sokajin'ireo bilaogy na ireo pejy sokajy lehibe. Raha mbola tsy nohamarininao izy ireo dia afaka mahita ny sokajy voalohany ato aminay eo amin'ny fitetezana lehibe: Analytics, fitorahana bilaogy, mailaka Marketing, Marketing finday, Search Engine Marketing, Social Media Marketing ary teknolojia.
Rehefa tsy mbola nisy mpanohana ara-dalàna teo aloha dia efa nanidy sponsorship 2 izahay! Emailium dia manohana ny lahatsoratray Email Marketing ary GetApp dia manohana ny lahatsoratray Teknolojia! Isaorana manokana iSocket ho an'ny rafitra fitantanana doka mahafinaritra.
Aza atao ambanin-javatra ny fampiasam-bola amin'ny endrika vaovao. Tiako ny milaza aminao fa momba ny atiny daholo izany - fa ny zava-misy dia ny fomba famolavolana sy fanehoana ny atiny dia saika manan-danja ihany.
11 Feb 2011 tamin'ny 2:42 maraina
Tantara fahombiazana lehibe! Tiako be ilay famolavolana vaovao.
11 Feb 2011 tamin'ny 2:43 maraina
Misaotra Brandon! Bebe kokoa eny an-dalana!
19 Mey 2011 tamin'ny 4:12 hariva
Mbola zatra ilay endrika vaovao aho, satria nahazo aina tamin'ny toerana nisy ahy. Fa satria, 75% ny mpitsidika dia vaovao matetika, zava-dehibe kokoa noho izany ireo mpitsidika vaovao tahaka ilay tranokala, ary miorina amin'ny isa azonao mazava ho azy ireo!
Izahay izao dia miasa amin'ny famolavolana endrika ny tranonkalantsika: http://www.roundpeg.biz ary hijery amin'ny antsipiriany kokoa ny fanovana nataonao mba hahitana izay azonay ianarana avy aminao.